प्रदेश नं. १ मा पीसीआर र आरडिटी विधिबाट ३ हजार २ सयको परीक्षण – BFM 91.2
प्रदेश नं. १ मा पीसीआर र आरडिटी विधिबाट ३ हजार २ सयको परीक्षण
विराटनगर, ८ वैशाख । प्रदेश नं. १ मा पीसीआर र आरडिटी विधिबाट ३ हजार २ सय बढीको परीक्षण गरिएको छ । आज साँझ सम्म दुवै विधिबाट ३ हजार २ सय ६८ जनाको परीक्षण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का शंकास्पद ६ सय ५९ जनाको नमूना संकलन गरिएको छ । नमूना संकलन गरिएका मध्ये १३ जना पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । ६६ महिला र ३ सय २५ जना पुरुष गरि ३ सय ९१ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
२ सय ५५ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । हिजो सम्म प्रदेश १ मा ३ सय ८७ जना शंकास्पद व्यक्तिको नमूना संकलन गरिएको थियो । आज एकैदिन २ सय ७२ जनाको नमूना संकलन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा आरडिटी विधिबाट २ हजार ६ सय ९ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
परीक्षण गरिएका मध्ये २ महिला र ४ पुरुष गरि ६ जनाको एण्टीवडी पोजेटिभ देखिएको छ । तेर्हथुममा गरिएको परिक्षणमा एक जना महिला र १ जना पुरुषमा एण्टीवडी पोजेटिभ देखिएको बताईएको छ । आरडिटीमा ३ सय ५५ महिला र २ हजार ४ सय ४८ पुरुष गरि २ हजार ६ सय ३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
प्रदेश १ मा आज ३ सय २१ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । प्रदेश १ मा आज सम्म ४ हजार ५ सय ७१ जना क्षमताको क्वारेन्टाईन निर्माण गरिएको छ । आज मात्रै १ सय १२ वेड थपिएको छ । आज सम्म १ सय १ महिला र ७ सय २४ पुरुष गरि ८ सय २५ जना क्वारेन्टाईनमा वसेका छन् ।
आज ५ महिला र ५ पुरुष गरि १० जना डिस्चार्ज भएका छन् । प्रदेश १ मा ४ सय ४९ आईसोलेसन वेड तयार गरिएको छ । आज सम्म आईसोलेसनमा ८ महिला र २७ पुरुष गरि ३५ जना भर्ना भएका छन् । २ जना डिस्चार्ज भएका छन् । प्रदेश १ मा होम क्वारेन्टाईनमा वस्नेको संख्या ४ हजार ३ सय ४३ पुगेको छ ।
७ सय १६ महिला र २ हजार ६ सय २७ जना पुरुष होम क्वारेन्टाईनमा वसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
← एकिकृत योजना बनाउन मोरङका मुस्लिम अगुवाहरुको जोड
उदयपुरमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमणको आशंका →
लायन्स क्लबका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा सेनिटाइजर हस्तान्तरण